रोचक Archives - Mero Khabar Nepal
HOME६ सय युवतीलाई एकजना पुरुष ! रोचक ६ सय युवतीलाई एकजना पुरुष !1 hour ago admin0SHARES ShareTweet मस्त जवानी, धपक्क बलेको रुप तर, अनेक चाहार्दा पनि विहेका लागि केटा नै भेटिँदैन । युवतीहरुमा देखिएको यो समस्या ब्राजिलको हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो गाउँमा ३५ बर्ष मुनीका ६ सय जना अविवाहित महिलाहरु रहेका छन् । तर, अविवाहीत पुरुष भने १ जना पनि छैनन् । ६ सय जना महिला तथा युवतीहरु विवाहको लागि पुरुष नपाए पछि सामुहिकक रुपमा पुरुषको खोजीमा छन् । समग्र ब्राजिलमा भने १ सय जना महिलाको भागमा ९८ जना मात्र पुरुष पर्छन् ।
शिल्पा पोख्रेलको आफु दोश्रो श्रीमान रहेको खुलाए छविले( भिडियो )
काठमाडौं /नायिका शिल्पा पोखरेलले श्रीमान् छवी ओझाविरूद्ध प्रहरीमा दिएको उजुरी छलफलबाट टुंगिएको केहि समय बित्न नपाउदै छविराज ओझाले शिल्पा पोख्रेलको आफु दोश्रो श्रीमान भएको खुलाएका छन।उनि भन्छन’म संग बिहे गर्नु अगाडिनै उनले अर्को संग डिभोर्स दिएको हो र अहिले म संग बिबाह भएको थियो। तर उनले अहिले पनि शिल्पाका लागि आफ्नो दिल र घर दुबैको ढोका खुल्ला भएको बताए । उनले शिल्पाको खुशीको लागि जस्तो सुकै त्याग गर्न पनि आफू तयार रहेको सन्देश समेत पठाए । आफू नै मारमा हुँदा पनि मिडियाबाजी नगरेकाले शिल्पाले आफूमाथि एकहोरो दोष थुपारेकोमा उनले निकै दुःख व्यक्त गरे ।
मेरो तिज गित बजार आयको छ सुने सेयर गरिदिनु होला
पत्नी शिल्पासँगको घर-झगडा बारे पति छवि ओझाले गरे यस्तो खुलासा (भिडियो सहित)….
काठमाडौं –‘बाघ’ निर्माताको ‘छवी’ बनाएका निर्माता छवी ओझाको छवी यतिवेला धमिलिन पुगेको छ । निर्माता ओझाको छवी फिल्मसँग सम्बन्धित विषयले भन्दा पनि घरेलु समस्याका कारण धुमिलिएको हो । यसअघि पनि पटक पटक वैवाहिक जीवनमा धोका बेहोर्दै आएका निर्माता ओझाको चौथो विहे पनि यतिवेला संकटमा परेको छ । नायिका समेत रहेकी शील्पा पोखरेलसँग करिब ३ बर्षअघि लगन गाँठो कसेका छवीको वैवाहिक सम्बन्धमा यतिवेला दरार उत्पन्न भएको छ । केही दिन अघि नायिका तथा छवीकी चौथी श्रीमतीको रुपमा भित्रिएकी शील्पाले प्रहरीमा श्रीमान छवीबाट ज्यान जोगाई पाउँ भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि घटना सतहमा सार्वजनिक भएको हो । यही विषयलाई लिएर छवीले प्रहरीमा गएर शील्पासँग मिलापत्रको कागज समेत गरिसकेका छन् । यद्यपि, मिलापत्र भए पनि छवी र शील्पा यतिवेला सँगै छैनन् । उनीहरु अलग अलग बस्दै आएका छन् । हिँजो ९आइतबार० उनीहरुको वैवाहिक जीवनको तीन बर्षे ब
नायिका शिल्पा पोखरेलले श्रीमान् छवी ओझाविरूद्ध प्रहरीमा दिएको उजुरी छलफलबाट टुंगिएको केहि समय बित्न नपाउदै छविराज ओझाले शिल्पा पोख्रेलको आफु दोश्रो श्रीमान भएको खुलाएका छन।उनि भन्छन’म संग बिहे गर्नु अगाडिनै उनले अर्को संग डिभोर्स दिएको हो र अहिले म संग बिबाह भएको थियो। तर उनले अहिले पनि शिल्पाका लागि आफ्नो दिल र घर दुबैको ढोका खुल्ला भएको बताए । उनले शिल्पाको खुशीको लागि जस्तो सुकै त्याग गर्न पनि आफू तयार रहेको सन्देश समेत पठाए ।आफू नै मारमा हुँदा पनि मिडियाबाजी नगरेकाले शिल्पाले आफूमाथि एकहोरो दोष थुपारेोमा भने उनले निकै दुःख व्यक्त गरे ।